पराग के हो? यो, सबै भन्दा पौष्टिक प्राकृतिक खाद्य उत्पादन को एक अलिकति मिठाई, flowery स्वाद भएको, र लगभग सबै छ यो पोषक मानव शरीर को उचित कामकाज लागि आवश्यक। Granules र पाउडर प्रोटिन जनाए, दलिया, दही, सलाद ड्रेसिङ र थप गर्न थप गर्न सकिन्छ। त्यो, पाचन समस्या सच्याउनुहुन्छ बढ्छ बोसो र क्यालोरी जल को दर, अस्थमा र एलर्जी को लक्षण relieves र रक्सी र लागूपदार्थ लागि इच्छाहरू समाप्त। यो सेल पुस्ता प्रबर्धन गर्ने, शरीर बाट toxins र कचरे हटाउँदछ थकान, निराशा र निद्रामा विकार झगडे, libido सुधार, र व्यायामको र घाइते देखि रिकभरी समय कम गर्छ।
प्रयोग पराग को एक विस्तृत श्रृंखला
फूल पराग रोगहरु र स्वास्थ्य समस्या को एक विशाल श्रेणी को उपचार को लागि चिकित्सा व्यापक फेला परेन। अध्ययन यो एक प्राकृतिक उत्पादन को जीवन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक, एंटीओक्सिडेंट र विरोधी भडकाऊ एजेन्ट छ विस्तार पुष्टि गरेका छन्।
पोषक पराग को पूर्ण सीमा संग एक उत्कृष्ट प्राकृतिक ऊर्जा र थकान लडाकु छ। चिकित्सा भिटामिन, खनिज र प्रोटिनको साथै शरीर खपत खाना बाट सबै पोषक प्राप्त गर्न अनुमति दिने, पाचन मा सहायता गर्न सक्ने समावेश इन्जाइमहरु छन्। पराग लाभ पनि histamine स्तर कम द्वारा एलर्जी को उपचार मा सहायता समावेश गर्नुहोस्। यो श्वसन पर्चा रोगहरु को एक व्यापक स्पेक्ट्रम विरुद्ध धेरै प्रभावकारी हुन्छ।
यो विभिन्न विशेष यो भोक वृद्धि लागू हुन्छ, दुर्व्यसनहरूमाथि को प्रकार को उपचार को लागि एक राम्रो उपाय हो। पराग यसलाई हानि वजन गर्न आउँछ विशेष गरी जब, एक महान उपकरण छ। युरोपेली डाक्टर जो रक्सी, समस्या छ मान्छे प्रयोग पराग रक्सी लागि तरस मा एक महत्वपूर्ण कमी देखाउन जब कि उल्लेख गरेका छन्।
पराग के हो? पछि यो खाना छ, त्यसपछि यसलाई छिटो र अझ प्रभावकारी गर्दा भोजन संग लिएको कार्य। यो तपाईं आंतों वनस्पति को एक कोमल सफाई गर्न अनुमति दिन्छ। ताजा उत्पादन को एक spoonful प्राथमिकताको गतिविधि बृद्धि गर्न सँगै फल नाश्ता मा लिइएको छ। पराग कारण प्राकृतिक भिटामिन को उच्च सामग्री तनाव र स्नायु विकार को अवस्थामा उपयोगी छ। यो energizes र वृद्ध प्रक्रिया सुस्त विश्वास गरिन्छ।
संरचना पराग अनाज
पराग के हो? यो राम्रो सहन र अन्य उपचार संग संयुक्त छ कि एक प्राकृतिक उत्पादन हो। यसलाई छोराछोरी, बढ्दै किशोरों र सबै उमेरका वयस्कहरूको लागि एक शक्तिशाली पोषण पूरक हो। यसलाई जो कि माथि मानव शरीर बनाउन लगभग सबै तत्व समावेश मात्र प्राकृतिक भोजन, छ। ताजा पराग कम्तीमा बीस एमिनो एसिड जो शरीर मा प्रत्येक सेल को निर्माण को लागि आवश्यक प्रोटीन को निर्माण ब्लक छन् समावेश गर्दछ। त्यहाँ पनि ताजा पराग मा निहित सक्रिय इन्जाइमहरु एक सय भन्दा बढि छ। तिनीहरूले शरीर रोग रोक्न र तिनीहरूलाई सामना गर्न मदत।
मौरी पराग को निको गुण
कारण उनको गुण गर्न, जब पराग को छाला लागू घाउ र मुखासे मा एक निको प्रभाव छ। यो पनि यो एक कम क्यालोरी उत्पादन हो र प्राकृतिक phenylalanine समावेश देखि, एक उत्कृष्ट वजन नियन्त्रक रूपमा मूल्यांकन गर्छन्। यो एमिनो एसिड भोक दबाउनु मद्दत गर्छ। को लेसितिण को भाग भंग र शरीर देखि बोसो हटाउन मद्दत गर्छ। शरीर rejuvenate आफ्नो क्षमता, को अंगहरु बढावा जाँगरको बढ्छ।
- स्वस्थ नयाँ कक्षहरू र ऊतक मर्मत सुधार को वृद्धि बढावा;
- toxins को उन्मूलन accelerates;
- कोलेस्ट्रल lowers;
- स्थिर दबाव बनाउँछ;
- संक्रमण विभिन्न प्रकारका गर्न प्रतिरोध बढ्छ;
- यो भयातुर सिस्टम stabilizes;
- महिला भी प्रजनन बढ्छ;
- delaying ट्यूमर वृद्धि;
- क्याल्सियम को अत्यधिक जम्मा समाप्त;
- अत्यधिक यूरिक एसिड को रिलीज बढावा;
- एकाग्रता र स्मृति सुधार;
- यौन गतिविधि बढ्छ;
- शक्ति, धीरज र समग्र ऊर्जा स्तर बढाउँछ;
- झगडे क्यान्सर, मधुमेह, गठिया र निराशा।
एक सबै भन्दा उत्तम प्राकृतिक उत्पादनहरु
पराग के हो? यो आश्चर्यजनक उपयोगी प्राकृतिक खाना तिनीहरूले अनन्त युवा प्राप्त गर्न खपत जो प्राचीन युनानी र रोमी द्वारा थपिएको "जीवन दिने धूलो" र "ambrosia" भनिन्छ। आधुनिक विज्ञान छ एक उत्कृष्ट कस्मेटिक मतलब छ, यो रहस्यमय अमृत प्राकृतिक कायाकल्प फैलाउने ऊर्जा दिन्छ, जीवन, संघर्ष एलर्जी संग prolongs र अपच relieves पुष्टि गरेको छ। साथै, यो सजिलै digestible प्रोटिन र लेसितिण, सम्पूर्ण शरीर लागि मस्तिष्क र स्नायु प्रणाली, साथै प्रदान ऊर्जा पोषण जो बनेको छ।
रूखहरू र बिरुवाहरु को पराग क्रस-pollination समयमा अर्को फूल को stigma एक anther देखि आनुवंशिक सामाग्री हस्तान्तरण गर्न प्रयोग। आत्म-pollination प्रक्रिया को मामला मा एक र एउटै बोट हुन्छ। प्रत्येक अन्न तरकारी गैर-प्रजनन कक्षहरू र generative (प्रजनन) कक्षहरू समावेश छन्। बोट फूल मा, वनस्पति कक्षहरू विशेष पराग ट्यूब उत्पादन र generative सेल दुई शुक्राणु कक्षहरू गठन गर्ने विभाजन गरेको छ। केही डूब जलीय बिरुवाहरु को अपवाद संग, परिपक्व पराग अनाज डबल पर्खालहरु छ। वनस्पति र generative कक्षहरुमा नाजुक पातलो पर्खाल सेलूलोज र टिकाउ बाहिरी तह Sporopollenin बनेको कमै मात्र छन्। तिनीहरूले सुरक्षा अत्यावश्यक बाहिर सुखाने र सौर विकिरण देखि आनुवंशिक सामाग्री। को पराग अनाज आकारहरू (सामान्यतया गोलाकार), आकार, र सतह चिह्नों एक विशेष प्रजातिका विशेषता एक विस्तृत विविधता छ।
पराग anthers र stamens angiosperms मा निहित microsporangia गठन गरिएको छ। पाइन एक माइक्रोस्कोप पराग अन्तर्गत हेरिएको, FIR वा स्प्रूस सानो पराग अनाज मलाई-nots, जो व्यास6माइक्रोन छन् फरक हुनेछ। angiosperm बिरुवाहरु मा समयमा anther फूल spore कक्षहरू चार समूह विभाजित छन् जो कक्षहरू, को एउटा ठूलो हुन्छन्। उर्वर spores कि पराग SAC को पर्खाल बढ्न विशेष स्टेराइल तहहरू कमै मात्र छन्। microsporogenesis फारम प्रत्येक diploid (अभिभावक) कक्षहरू देखि चार haploid microspores विभाजन (meiosis) पछि को प्रक्रिया मा। को पराग बोरा को पर्खाल एक विशेष इन्जाइम विभाजित भएपछि liberated पराग अनाज आकार बढ्न र आफ्नो विशेषता आकार प्राप्त।
पराग छैन केवल मौरीले प्रेम छ
सिकारी र परजीवी arthropods र Hymenoptera धेरै प्रजाति को आहार मा मौरीले आफ्नो मुख्य उपभोक्ताहरु छन् कि व्यापक विश्वास बावजुद, पराग समावेश गर्नुहोस्। Spiders साधारण मांसाहारी मानिन्छ, तर पराग एउटा महत्त्वपूर्ण खाद्य केही प्रजाति लागि, स्रोत वेब को मद्दतले बीउ कदर विशेष गरी ती कैच छ। यो उत्पादन को admirers बीचमा पनि जस्तै कीरा, छ beetles, weevils, पात beetles, लामो-horned beetles। यो एक लेडीबर्ड मुख्य रूप कीराहरू मा फीड कि ज्ञात छ, तर यसको प्रजाति धेरै पनि पराग खान्छन्। यो पनि Hemiptera कीराहरू, झिंगा, moths, चमेरो, र Fungi लागू हुन्छ।
पाइन पराग को अविश्वसनीय गुण
पाइन पराग - अनिवार्य प्रशस्त मात्रामा रूख वरिपरि हावा भरिन्छ कि धूलो छ। यो मस्तिष्क को neurotransmitters संग सम्बन्धित छ जो phenylalanine भनिने पदार्थ, समावेश छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण घटक जो वृद्धि हर्मोन को रिलीज बढ्छ र महिला मा प्रजनन बढ्छ, arginine छ। यो ठूलो पुरातन Sages छ, आफ्नो रजाई फीड र माटो, बोट, पशु nourishes कि सुन पराग सम्पूर्ण वातावरण कवर - यो पाइन रूखहरू बताए छ। पाइन पराग - वृद्धि र पुनर्जनन फैलाउने, alertness बढाउँछ, जीवन उत्प्रेरित गर्छ र पनि उद्देश्य प्राप्त गर्न मा मद्दत गर्छ एक पदार्थ। छैन यसलाई ठूलो ध्वनि? यो साँच्चै हो? यो carotene, भिटामिन ए र बी, बी 1, बी 2, बी 3, B6, फोलिक एसिड, भिटामिन डी र ई, खनिज, फलाम, पोटासियम र जस्ता सहित को ठूलो को एक ठूलो संख्या समावेश गर्दछ। को आठ आवश्यक सहित उनको बीस भन्दा बढी एमिनो एसिड, मा। तर सायद सबैभन्दा रोचक स्वास्थ्य लाभ पाइन रूखको पराग एक एण्ड्रोजन मानिन्छ छ। यसले टेस्टोस्टेरोनको स्तर वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता छ र यसको प्राकृतिक स्रोत छ भन्ने हो। सोही, पाइन पराग मिठाई र पेय मा एक संघटक रूपमा कोरिया मा परंपरागत खपत भएको छ।
यो उत्पादन सुरक्षित छ?
मौरी पराग कम्तिमा गर्दा छोटो अवधि भित्र प्रबन्ध, सुरक्षित छ। साधारण मह रूपमा मौरी पराग, सास, कर्कश, edema र anaphylaxis को shortness सहित गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया, हुन सक्छ। यो गर्भावस्था को समयमा यसको सेवन सीमित गर्न उचित छ। महिला पनि स्तनपान समयमा मौरी पराग को प्रयोग गर्नु हुँदैन। केही रगत thinners लिदा मौरी पराग रक्तस्राव वृद्धि हुन सक्छ। कुनै पनि मामला मा, आत्म-medicate अघि, तपाईंको डाक्टर संग परामर्श।
कसरी एक अणु आकर्षित गर्न: सरल सुझाव
Amundsen सागर: भू-, जलवायु, Fauna
हक्की खेलाडी Kvartalnov दिमित्री: खेल र कोचिंग क्यारियर
नायलॉन तार। कसले छनौट गर्ने?
कसरी आफ्नो हातले राम्ररी खन्नुहोस् गर्न?
बौद्ध भिक्षु को प्रतिबद्ध आत्म-immolation। आत्म-Immolation, 1963
अभिनेता Afanasev Valery: दोस्रो भूमिकाको होइन "अज्ञात"
कछुए को कंकाल: संरचना को विशेषताहरु र एक फोटो
टमाटर सस मा क्यान्ड सिमी। सबै भन्दा राम्रो नुस्खा
एक नमूना फारम र नियम - यो हल्ला छिमेकी मा जिल्ला द्वारा विवरण